गोलवजार जित्ने श्यामकुमारको यस्तो छ प्रतिवद्धता |
गोलवजार जित्ने श्यामकुमारको यस्तो छ प्रतिवद्धता
प्रकाशित मिति :2017-09-13 10:32:27
नीति र नेता मिलेपछि त्यसले ईनर्जी (उर्जा) दिन्छ । त्यसैले राप र ताप दुबै दिन्छ समाजलाई । तर जव त्यसमा राजनैतिक इमान्दरीता जोडिन्छ अनी सिनर्जी (बहु उर्जा ) उत्पति हुन्छ । त्यसले समाजलाई थप प्रकाश पनि दिन्छ । नेपालको संविधान र राजनैतिक प्रणालीले स्थानीय तहको परिकल्पना र प्रारुप यसरी निर्माण गरेको छ की साशन प्रकृयामा आम जनतालाई सहभागी गराउने उद्देश्य बोकेको छ । लोकतन्त्रको मान्यता अनुसार प्रत्येक जनतालाई आफू अन्य कोहीवाट साशित छु भन्ने भान हुनु भएन । त्यसकारण लामो समय देखि नेपालको शासन संचाालन हुने ठाउ सिंहदरवारको अधिकार कटौति गरी स्थानीय तहमा पत्यायोजन गरिएको छ । त्यो पनि स्थायी रुपमा । सिंहदरवारले चाहेको वेला अव स्थानीय तहको अधिकारमा अंकुश लगाउन सक्दैन । स्थानीय तह अव अविच्छिन्न र स्वायत्त निकाय हो । आफ्नो साशन आफै गर्दैछु भन्ने भान हुन आवशयक छ । लोकतन्त्रमा असल साशन छ की छैन भन्नेकुरा जनताको संतुष्टिसंग गाँसिएको छ । जनता संतुष्ट छैनन भने साशन असल छैन भन्ने बुभिन्छ । लोकतन्त्रको यो मान्यतालाई फलिभुत गर्न सक्ने राजनैतिक दल र नेताले मात्र स्थानीय तहलाई जनचाहना अनुरुप हाक्न सक्छ । त्यसकारण अव आउने जनप्रतिनिधि निती र नैतिकताले विभुषित हुनुपर्छ । जिम्मेवार पदमा नहुँदा त समाजमा हैकम र रवाफ देखाउनेहरु पदमा पुगेपछि निरंकुश हुन सक्छ । नेता छान्दा जनता भन्दा पनि बलियो हुने व्यक्तिलाई छान्न हुँदैन । जनतालाई सहजीकरण गर्ने र जनताको वशिकरणलाई स्विकार्ने नेता चाहिन्छ । यो कुरा आम मतदाताले बुझ्नै पर्छ । एमाले नीति प्रधान पार्टी हो । यो पार्टी सिद्धान्त र उन्नत तथा सौहार्दपूर्ण समाजमा विस्वास गर्छ । एमालेले मात्र समाजलाई न्याय, राप, ताप र प्रकाश दिन सक्छ । त्यसैले विगत दुई चरणको निर्वाचनमा एमालेलाई जनताले पहिलो पार्टी बनायो । अव प्रदेश नम्बर २ मा पनि एमाले पहिलो स्थानमा रहन्छ । यो कुरा गोलवजार नगरपालिकामा पनि लागू हुन्छ ।
समाजलाई जोड्नु धर्म हो । समाजलाई तोड्नु पाप हो । अपराध हो । हाम्रो समाज जहाँ कुनै निरीह प्राणीले पनि विना भय र त्रास बाँच्न पाउने अवस्था थियो । आज सिंगै समाज असुरक्षित महशुर गर्दैछ । समाजमा हिंसालाई स्थापित गरियो । विद्वेष र दुर्भावना फैलाईयो । सामुदायिक मेलमिलापलाई अपाच्य बनाइयो । लकडपेच र घुर्चिफिर्ची जस्को जीवनको आदर्श बन्यो तिनले समाजलाई वर्वाद पारे । गोलवजारवासीहरु मध्यरातमा व्युझिदा पनि आफ्नो जमिन सुरक्षित छ की छैन भनेर तर्सिने, बा लकडपेच लगाईयो की भनेर त्रसित हुने अवस्था आयो । झन त्यस्ताले निर्वाचन जिते भने के होला ? आम मतदाताले सोच्नै पर्ने आवश्यकता छ । भष्मासुर प्रवृतिलाई जनप्रतिनिधि नबाऔं । हिटलरी प्रवृतिलाई परास्त गर्नु नै आम जनताको कर्तव्य हो । समाजलाई कुटिलताको शिकार नबाऔं । पुरै समाज एउटा घर वा परिवारको बन्धक बन्ने दिन नआओस गोलवजारमा । समाजमा भोली चित्कारहरु नसुनियोस् । त्यसकारण पनि एमालेले जित्न आवश्यक छ ।
धुरी माथी चढेर शौच गर्ने अभिभावक छ भने सडकमा शौच गर्ने सन्तानलाई के नराम्रो भन्ने ? राजनैतिक दल मुख्य कुरा हो । दल नै नीति प्रधान छैन । दलको नीति नै जनमुखि छैन भने त्यसका अनुयायीहरुले समाजलाई नितीपथमा कसरी डोरयाउन सक्छन् । जसको लागि राजनीति एउटा तिकडमवाजीमा आधारित जित्ने खेल सावित भएको छ त्यस्ता राजनीतिक दलहरुले समाज र जनतालाई बिकास दिन सक्दैन । मात्र झुठा आस्वासन बााड्न सक्छन् । याद गरौं संविधानसभाको निर्वाचन ताका यो समाजलाई के के सपना बाँडियो ? आज ती आस्वासन बााड्ने नेता आएर भनुन त हाम्रो समाजमा, के के सपना पुरा गरे तिनले ? छैन, केही छैन । सपना सोम शर्माको कथा जस्तै भयो । तिनै तिकडमवाजलाई जिताउन अथक भूमिका खेले वापतको पारितोषिक हो अहिलेको मेयरको टिकट । यो कुरा हामीले भनी रहनु पर्दैन । स्वयं त्यही पार्टीका नेता र कार्यकर्ता जसलाई भित्तामा पुर्याईयो , उनैले भनिरहेका छन् ।
गोलवजार उदीयमान शहर हो । अहिले यसको बिकास शहरको रुपमा भईसकेको छैन । तर गोलवजारको भविष्य आशलाग्दो छ । यसलाई निमोठ्नेहरुसंग जनता सावधान हुनैपर्छ । समाजको सवै वर्ग र तह तथा जात जातिहरु विच सुमधुर समबनध कायम राखन सक्ने र सामाजिक विविधता विच सुसम्बनधको बिकास गर्न सक्नेले नै गोलवजारको कायाकल्प गर्नसक्छ । कसैको दादागिरी र कोही भयआतुर रहने समाजले उन्नति गर्न सक्दैन । मेलमिलापमा आधारित परस्पर सहयोगी समाज एमालेले मात्र निर्माण गर्न सक्छ । बाली लगाउने वेला किनारामा बसेर रमित हेर्नेहरु आज फसल काट्न सवैभन्दा अगाडी छन् । जनताले यो कुरा बुझेका छन् । तसर्थ गोलवजारका जनताले एमालेलाई जिताउने छन् भन्ने कुरामा सबै गोलबजारबासी विस्वस्त छन् । एमालेको जित सुनिश्चत जस्तै भएको छ । सूर्य त उदायो उदायो गोलवजारमा ।
सवकियो करि सुर्यमे मतदान